Fahaleovantena… hitondra fahatsiarovan-tena | NewsMada
Fahaleovantena… hitondra fahatsiarovan-tena
Par Taratra sur 25/06/2018
Efa sa vao 58 taona ity hoe Fahaleovantena? Tsy hita izay hoe fandrosoana. Mifamadibadika lava amin’ny krizy miverimberina ny tantaram-pirenena sy ny vahoaka… mitoetra fa ny mpitondra, mandalo na mitsingeringerina. Tsy amin’ny inona fa amin’ny fampanantenana efa ho lava: fiovana sy fanovana, fampandrosoana sy fisandratana…
Ankalazaina isan-taona toy izao ny hoe Fahaleovantena. Mby aiza? Mbola mahabe adihevitra: an-taratasy sy am-bava ihany, ara-politika fa tsy toekarena, sarintsariny… Tsy vitan’izany, mbola iadiana ny tena Fahaleovantena. Eo hatrany tsinona ny fiankinan-doha amin’ny any ivelany, na ny fitsabahan’ny vahiny amin’ny raharaha eto an-toerana.
Firy tao-maty izay? Tsy hita ihany izay tena fiovana sy fanovana, fa tsy misitraka inona amin’ny hoe manankarena i Madagasikara ny vahoaka ifotony. Tsy mahay mifanaraka tsinona ny samy Malagasy, anjakazakan’ny mpilalao fa tsy mpanao politika. Vokany, manararaotra ny vahiny: manoro hevitra, mibaiko, manery, mitondra, mangeja… ?
Na ny hazo no tapaka, ny sampany no miandany amin’ny vy? Politika io, arakaraka ny fifandanjan-kery ary ny tombontsoa iadiana sy arovana. Mba inona loatra àry izay hoe fifandanjan-kery amin’ny mpilalao fa tsy mpanao politika izay? Eny, na ny tombontsoa iadiana sy arovana aza. Izany no fototr’izao fahasahiranan-dava izao?
Saika tonga kisendrasendra na tsy niomana eo amin’ny fitondrana hatrany no hoe matanjaka sy manana ny maro anisa. Tsy ny mampatanjaka azy no nahazoany fanjakana fa ny fahazoany fanjakana no mampatanjaka azy… mampiasa fahefam-panjakana ho amin’izany. Fitaovana politika ny fitantanan-draharaham-panjakana, fa tsy inona.
Tena hisy ve ny fanovana sy fiovana amin’izany? Na tena Fahaleovantena amin’izay. Tsy miova ny fomba fanaovana politika, ny ambadibadika: na izay kendrena sy manosika ny tena, na izay mibaiko… Tsy mahagaga raha misy na maro ny hoe leo politika na ny mpanao politika no marimarina kokoa. Mba hitondra fahatsiarovan-tena ny Fahaleovantena?